Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. कर्णाली प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन समितिलाई हस्तान्तरण – Emountain TV
सुर्खेत, २८ भदौ । कर्णाली प्रदेशमा निर्माण गरिएको प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
शनिबार एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शहरी विकास मन्त्रालयको रोहोवरमा अस्पतालको नयाँ भवन अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले यो अस्पतालको सञ्चालनसंगै कर्णाली प्रदेशका जनता सामान्य बिरामी हुँदा समेत उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले अस्पतालका लागि चाहिने सबै खालका जनशक्ति तथा टेन्डर पनि भईसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस आर्थिक बर्षको अन्त्य अगावै ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि आफुहरु लागिपरेको समेत बताउनु भयो ।
भवन मात्र भएर नहुने भन्दै कर्णाली प्रदेश अस्पतालका प्रमुख डा. डम्मर खड्काले अस्पतालमा अहिले जे जस्तो भए पनि आउने दिनमा छिटै मानवीय शक्ति र उपकरणका साधनले भरिपुर्ण बनाउने बताउनु भयो । अस्पताल हस्तान्तरणसंगै स्थानीयले छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन् ।